Nolosha Warbaahinta Bulshada
Axad, Febraayo 12, 2012 Douglas Karr
Infograafigani wuxuu runtii la mid yahay istiraatiijiyadda aan u adeegsanno macaamiisheenna hay'addayada warbaahinta bulshada: Kormeerka - waxaan la soconnaa sumadda iyo warshadaha labadaba si aan ula socono macaamiisheenna. Falanqeeyaan - waxaan falanqeyneynaa astaanta si loo aqoonsado wixii arrimo sumcad iyo dareen ah. Waxaan falanqeyneynaa shaqaalaha si aan u helno fursado, aan ula soconno tartamayaasha isla markaana aan gacan uga geysano horumarinta istiraatiijiyado. Wadashaqeyn - ka faa'iideysiga waxyaabaha dhexdhexaadka ah dhammaan xeeladahaaga oo dhan ayaa fure ah. Kordhinta mid dhexdhexaad ah kan kale,
Iyada oo codsiyo badan oo ganacsi ay ka baxayaan Microsoft, Mac wali waa xanuun ku jira badhida si uu ugu ordo goobta ganacsiga. Cusbooneysiinta Nidaamka Howlgalka cusub ee Apple wuxuu bixiyaa xoogaa gargaar ah BootCamp, oo ah codsi kuu oggolaanaya inaad laba-ku dhejiso Mac-ku-saleysan Intel midkood OSX ama Windows. Kordhinta laba-geesoodka ah, inta badan, runtii waxay u egtahay in laba kumbuyuutar oo kala duwan laga isticmaalo isla qalabka, in kastoo. Bootcamp wuu fiican yahay, laakiin dib ayuu u laabanayaa